Fonds Enseignement Enseignant | FXCC dia mpikambana ao amin'ny ICF
Home / About / Nahoana no FXCC / Client Money Protection
Ny FXCC dia efa nanolo-tena hatrany amin'ny fenitra ambony indrindra amin'ny fanarahan-dalàna iraisam-pirenena, ary efa nikatsaka hatrany ny hanome fiadanana tanteraka ho an'ny mpivarotra, isaky ny mivarotra izany na aiza izy ireo. Noho izany, noho ny fahafaha-miditra maneran-tany any amin'ireo kontinanta misongadina, ny orinasa dia nanome antoka fa ny rafitra ara-dalàna dia mifanaraka amin'ny fepetra ilaina ho an'ny Eoropeana, fa koa ho an'ny sehatra iraisam-pirenena.
Betsaka ny fepetra napetraky ny FXCC no mihoatra ny fepetra fototra takiana amin'ny asa atao any amin'ny firenena samihafa. Manao izany isika mba hanomezana ny mpanjifantsika amin'ny fampiononana sy ny fahatokiana rehetra, mba hahafahantsika mahatsapa ho voaro tanteraka amin'ny fifampiraharahana miaraka amintsika.
Amin'ny modelim-pandraharahana ataontsika, ny fahombiazantsika dia mifandray mivantana amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa, ary amin'ny alalan'ny fitokisana sy mangarahara, satria ny tena lanjantsika dia mikatsaka ny hanorina fifandraisana miorina amin'ny mpanjifantsika isika, izay manana ny tombontsoany tsara indrindra.
Ny tanjontsika dia ny manome safidy
Fiarovana sy fanaraha-maso
Ny FXCC dia miantoka ny fiarovana sy ny fiarovana ny kaonty mpanjifa. Ankoatra izany, ny fangatahana ara-bola rehetra dia dinihina akaiky mba hiantohana ny fiarovana ara-bola ary hiantohana ny fomba fiasa mahomby.
Amin'ny maha-mpandamina tsara sy mahomby antsika hatramin'ny 2010, dia manolo-tena amin'ny fikarakarana ny mpanjifantsika amin'ny fifantohana amin'ny fanomezana fiarovana ny mpanjifa sy ny fiarovana ara-barotra isika.
Matokia sy mangarahara
Ny fiaraha-miasa mahomby sy maharitra dia natsangana tamin'ny fitokisana. Ny tanjona dia ny hanomezana ny fepetra ara-barotra izay tadiavin'ny mpivarotra, ny hahazoana ny fanajana sy ny fitokisana ny mpanjifa, dia manome antoka ny tena mahaliana azy, ny FXCC dia miasa amin'ny tena modely STP / ECN. Amin'ny fanaovana izany dia manome antoka ny mangarahara izahay ary tsy misy fifandonana mahaliana.
Miaraka amin'ny famelabelarana fiarovana amin'ny tambajotra azo antoka (SSL) momba ny tambajotra sosialy, dia voaro ny fampahalalana tsy miankina rehetra ataon'ny mpanjifa.
Ny FXCC dia mamaritra matetika, manombana ary manara-maso ny karazana risika rehetra mifandraika amin'ny asany.
Fividianana fonon'ny Client
Ny volan'ny mpanjifa rehetra dia apetraka amin'ny kaonty samihafa, misaraka tanteraka amin'ny kaonty sy ny fikambanana rehetra ao amin'ny FXCC.
Rehefa manokan-tena isika amin'ny fananana ny volan'ny mpanjifantsika, dia azo antoka izy ireo ao amin'ny Banky Leading International.